NIR inotora madhayi
Yakakwira Fluorescent Dhayi Tsvuku
Kumusoro kushandura pigment
uv fluorescent pigment ye ...
Thermochromic pigment kuti t ...
Photochromic pigment uv nguruve ...
uv fluorescent pigment yeanti-falsification kudhinda
UV fluorescent pigmentiyo pachayo haina ruvara, uye mushure mekumedza simba reiyo ultraviolet mwenje (uv-365nm kana uv-254nm), inokurumidza kuburitsa simba uye inoratidza yakajeka yakajeka fluorescent maitiro. Kana sosi yechiedza yabviswa, inomira nekukasira ndokudzokera kune yepakutanga isingaonekwe mamiriro.
Yakakwira Fluorescent Dhayi Tsvuku yeGreenhouse Firimu
Yakakwira Fluorescent Dhayi Tsvuku iri Yakakwira Inoita Fluorescent madhayi epurasitiki kuchenesa, ine Yakaisvonaka mamiriro ekunze, Kupisa kwakasimba kupisa, Yakanyanya yakakwira chroma!
UV fluorescent pigment pachayohaina ruvara, uye mushure mekudhonza simba remwenje yeultraviolet (uv-365nm kana uv-254nm), inokurumidza kuburitsa simba uye inoratidza yakajeka yakajeka fluorescent mhedzisiro. Kana sosi yechiedza yabviswa, inomira nekukasira ndokudzokera kune yepakutanga isingaonekwe mamiriro.
Thermochromic pigment ye thermochromic Paint Thermochromic Ink Thermochromic Mucheka
Themochromic pigmentsanoumbwa nema micro-capsules ayo anochinja ruvara zvichidzoka. Kana tembiricha ikakwidziridzwa kune yakatarwa tembiricha iyo pigment inoenda kubva kune mavara kune isina mavara (kana kubva kune rimwe vara kuenda kune rimwe ruvara). Ruvara runodzokera kune rwekutanga ruvara sezvo iyo pigment yatonhodzwa pasi.
Photochromic pigment uv pigment ruvara shanduko yeupfu nezuva
Photochromic pigment rudzi rwemicrocapsule. Neupfu hwepakutanga hwakaputirwa muma microcapsule.Powder zvinhu zvinogona kuchinja ruvara muchiedza chezuva. Rudzi urwu rwezvinhu rune hunhu hweyakajeka ruvara uye nemamiriro ekunze akareba. Inogona kuwedzerwa zvakananga zvichienderana nechigadzirwa chakakodzera.
Qingdao Topwell Chemical Zvekushandisa Co., Ltd.
Nhare: + 86-312-3022806